ဥရောပပြီးတော့ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန်ခုနှစ်တွင်သမိုင်းဝင်ဟိုတယ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပပြီးတော့ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန်ခုနှစ်တွင်သမိုင်းဝင်ဟိုတယ်
ဥရောပတိုက်တွင်သမိုင်းဝင်ဟိုတယ်များမှာ မရှားပါးမျက်မှောက်, အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝသမိုင်းနှင့်အတူကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာ. ပဲရစ်, လန်ဒန်, ရောမမြို့, မြူးနစ်, ဗီယင်နာ - ဤမြို့ကြီးများ၏အားလုံးကမ်းလှမ်းရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သောအရပ်တို့ကိုမရှိ. ခရီးသွားဧည့် တချို့တပ်မက်သောသူသည် ရိုးရာဇိမ်ခံ ဥရောပတိုက်တွင်ဆက်နေရန်နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ခြင်းမရှိအခက်အခဲများရှိသည်လိမ့်မယ်. အဲဒီအကြောင်းအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုသင်ရထားထိုမြို့ရှိသမျှတို့ကိုသွားရောက်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဘတ်ဂျက်အပေါ်. ဤတွင်ထိပ်ဆုံးငါးသမိုင်းဝင်ဥရောပတိုက်တွင်ဟိုတယ်များနှင့်မည်သို့ရထားအဲဒီမှာရဖို့ရှိပါတယ်:
1. ကျနော်တို့နှင့်အတူသမိုင်းဝင်ဟိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းစတင် – အဆိုပါ Ritz, ပဲရစ်
ဥရောပမှာထိပ်တန်းသမိုင်းဝင်ဟိုတယ်များ၏အဘယ်သူမျှမစာရင်းပဲရစ်မပါဘဲပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်. ယင်း၏ဧညျ့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာပုလဲထွက်ရပ်: အဆိုပါ Ritz. ဟိုတယ် ငွေရတတ်သောသမိုင်းဂုဏ်ယူ နှင့်ဇိမ်ခံအတွင်းပိုင်းကနှင့်အတူလိုက်ရန်. ဒါဟာခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် 1898, ပင်ထို့နောက်၏အထွတ်အထိပ်ခဲ့သည် သက်သာခြင်း.
အဆိုပါ Ritz ဥရောပမြင့်မားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအဘို့အသဘာဝကျကျတစ်ဦးလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုကိုခဲ့သည်. ၎င်း၏ကျော်ကြားဧည့်သည်များထဲကတချို့ဟာဝင်ဆာ၏ Duke နဲ့ Duchess ခဲ့ကြသည်, ခိုခို Chanel, နှင့် Ernest Hemingway, အခြားသူတွေအကြား. သငျသညျက၎င်း၏လေ့လာစူးစမ်းရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင် ညှို့တတျသော သမိုင်း, သင်တို့ကဲ့သို့အခြားအဓိကဥရောပမြို့မြို့တို့မှပဲရစ်ရထားယူနိုင်ပါသည် လန်ဒန်, ရောမမြို့, အမ်စတာဒမ်, သို့မဟုတ်ဘရပ်ဆဲလ်.
2. Belmond Cadogan ဟိုတယ်, လန်ဒန်
လန်ဒန်မြို့ရှိ Belmond Cadogan ဟိုတယ်တစ်ခု Boutique ဟိုတယ်စဉ်းစားသည်, ဒါပေမယ့်တကရှည်လျားပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိပါတယ် သမိုင်း. တချို့ကကအချိန်များတွင်ပင်သိသိသာသာကြီးလို့ပြောလိမ့်မယ်, အော်စကာရိုင်းရှိသည်သူ၏ဖမ်းဆီးခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်အဖြစ် 1895. အဆိုပါ Cadogan ရှိပါတယ် 64 အခန်းပေါင်းနှင့်အံ့သြဖွယ် Edwardian လေထု. ဒါဟာသမိုင်းဝင်မြို့တွင်းစုပေါင်းဖွင့်, ထိုသို့ခေတ်များ၏ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်တွေအများကြီးထား. သင်တို့သည်ငါတို့၏ပထမဦးဆုံးထောက်ခံချက်ယူလိုလျှင်, သင်အလွယ်တကူရထားပဲရစ်ကနေလန်ဒန်ကိုခရီးသွားလာနိုင်.
3. Albergo del တစ်ဦးတည်းသောအယ်လ် Pantheon, ရောမမြို့
အခါဥရောပတိုက်တွင်သမိုင်းဝင်ဟိုတယ်များမှကြွလာ, ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ Albergo del တစ်ဦးတည်းသောအယ်လ် Pantheon ကိတ်မုန့်ကြာ. ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးဟိုတယ်များ၏တဦးတည်းရဲ့, ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1467! အဆိုပါလျစ်လျူရှုကြောင်းအခန်းပေါင်း Pantheon အကောင်းဆုံးကိုဖြစ်ကြသည်, အလှဆင်အဖြစ် Renaissance-စတိုင်ကုတင်နှင့် 17 ရာစုနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများနှင့်အတူပြည့်စုံ. ဒါဟာမဆိုပိုကောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသမိုင်းဆိုင်ရာထက်ရပါဘူး. နောက်ထပ်အပိုဆုကြေးရောမမြို့မှခရီးသွားရထားအတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်အခြားအဓိကကနေစတင် အီတလီမြို့ကြီးများ.
4. ဟိုတယ် Torbrau, မြူးနစ်
အဆိုပါ Torbrau တစ်ကြွင်းသောအရာနှင့်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့ Salzburg ထံမှငြီးငွေ့ခရီးသွားများအတွက်နေရာတစ်နေရာအဖြစ်စတင် ကောင်းသောဘီယာ. ဒါဟာကျော်ဘို့ operating ခဲ့ရဲ့ 500 နှစ်ပေါင်း, ထိုသို့ '' 90 အတွက်၎င်း၏ခေတ်သစ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလက်ခံရရှိ. အဆိုပါ Torbrau တစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက် တစ်ဦးထက်ပိုသောခငျြတဲ့သူခရီးသွားဧည့် အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော သမိုင်းဝင်ဟိုတယ်အတွေ့အကြုံကို. သငျသညျဆိုရင် ရထားမြူးနစ်သွားရောက်လည်ပတ် ဘာလင်ကနေ, ဗီယင်နာသို့မဟုတ်အခြားဥရောပမြို့ကြီးများ, သငျသညျ Torbrau မှာနေဖို့စီစဉ်နိုင်.
5. The Grand ဟိုတယ် Wien, ဗီယင်နာ
The Grand ဟိုတယ် Wien built-in 1870, သာပုဂ္ဂလိကနေထိုင်ရာအဖြစ်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏကိုသုံးစွဲ. ဒါဟာ၏အော်ပရာဧရိယာတဝိုက်တွင် "Ring ကိုဟိုတယ်" ၏ရှေးအကျဆုံးင် Ringstrasse ဗီယင်နာ. အဖြစ်ဝေးသမိုင်းဝင်အဖြစ်, ဟိုတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကြေကွဲဖွယ်နှစ်ဦးစလုံး၏၎င်း၏ဝေစုကိုမြင်ခဲ့ပြီ. ဒါဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအဆုံးသတ်သော Mayerling ကိစ္စ၏နောက်ခံခဲ့သည်, အဆိုပါသြစတြီးယားအိမ်ရှေ့မင်းသား Rudolf ၏သေခြင်းတရားနှင့်သူ၏ချစ်သူကိုနှင့်အတူ, Baroness မာရီ Vetsera. ဇာတ်လမ်းသင်စိတ်ဝင်တစားလေ့လာလျှင်, သငျသညျလညျပတျဖို့ဥရောပတိုက်တွင်သမိုင်းဝင်ဟိုတယ်များသင့်ရဲ့စာရင်းကိုဖို့က Grand add နိုင်. မှဦးခေါင်း ရထားဗီယင်နာ မြူးနစ်ကနေ, Salzburg မှာရပ်တန့်နှင့်အတူ.
သငျသညျဥရောပအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသမိုင်းဝင်ဟိုတယ်အချို့သွားရောက်ရှာဖွေနေပါသည်? အဓိကဥရောပမြို့ကြီးများအားဖြင့်သင်တို့၏ခရီးစီစဉ်ခြင်းနှင့် ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် ထိုပြည်၌သင်တို့သည်မရ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhistoric-hotels-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဟော်တယ် #ဟိုတယ်များ #ဗီယင်နာ europetravel မြူးနစ် trainjourney ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား travelaustria travelfrance travelgermany travelparis travelrome
ရထားခရီးသွားခြင်း, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား